Ma waxaan ahay A ** god? | Martech Zone
Ma waxaan ahay A ** god?
Khamiista, Noofembar 20, 2008 Jimco, Abriil 23, 2021 Douglas Karr
Ma waxaan ahay ** god?
Akhristayaasha balooggaygu sida caadiga ah way isoo taagaan waxayna la hadlaan ixtiraamka, xamaasadda, iyo naxariista waxaan isku dayaa inaan ku soo bandhigo balooggeyga. Xaqiiqdii waa shaqsi aan qorsheeyo iyo mid aan isku dayo inaan ka shaqeeyo si kaamil ah maalin kasta. Qoraalada Blog-ku waxay leeyihiin faa iidada qorshaynta hore (in kastoo waagii hore, anigu waan ahaan jiray qurux badan), laakiin nolosha dhabta ahi sidaa uma shaqeyso.
Waxaan had iyo jeer lahaa rabitaan macaan oo macluumaad ah. Waan ka xanaaqsanahay naftayda markii qof kale keeno farsamo cusub oo aanan waxba ka aqoon. Maalin kadib shaqada, waxaan isku aasaa internetka anigoo baaraya wax walboo iyo meeraha. Aniga doonayaa in la wada ogaado. Aniga doonayaa in aan ra'yi ka yeesho wax walba (oo inta badan waan sameeyaa).
Shaqaalahayga, in kastoo, si adag ayaan ula shaqeeyaa si aan u aqoonsado halka ay xuduudaha mas'uuliyadaydu ka bilaabmaan kuna dhammaanayaan. Hagaya qaar ka mid ah istiraatiijiyadda ugu muhiimsan ee shirkadeena, ma awoodo inaan xaadiro kulan kasta oo aan ku tuuro 2 senti kasta wadahadal kasta. Waxaan shaqaaleysiinay shaqaale ka karti iyo aqoon badan xirfaddooda sidii aan waligey noqon doono. In kasta oo xamaasad leh, waxaan u baahanahay inaan nafsadeyda gooyo oo aan xooga saaro meelaha aan kari karo waana inaan saameyn ku yeesho.
Toddobaadkan waan faqay Sharciga No Asshole: Dhisida Goob Shaqo Ilbaxnimo iyo Mid Ka Badbaada Taasi Maaha by Robert Sutton. Ma ahan tan akhriska Masaska Dacwadaha: Marka Cilmi-nafsiyeedyaashu Shaqada Aadaan, Miyaan aad ula jacelnahay buug ka hadlaya dhaqanka goobta shaqada iyo cilmu-nafsiga.
Muddo sanado ah, waxaan qaatay (cidna iima siinin) walwalka guusha ama guuldarada urur. Waxaan daawaday shaqaalahayga badan ee ila shaqeeya inay nolosha ku cuneen culeyska shaqada aniga qudhayduna waxaan la kulmay dib u dhac aad u xun sidoo kale.
Laga yaabee inaan gadaal ka riixayo 2 sano oo riwaayad goobta shaqada ah oo iga dambeysa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan maanta qabanayo sidii aan ahaa toban sano ka hor. Marmarsiinyo kama haayo hamigayga, weligayna ma qarin maayo. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku weynaaday inaan si caadifad leh ugu xirnaado arrimaha iyo mas'uuliyadaha ay wada-hawlgalayaashu ku wadi doonaan qeexidda iyo fulinta.
Natiijadu waa guul! Waxaan dhaafayaa hadafyadeyda 4-tii rubuc hada, anigoo saameyn weyn ku yeelanaya shirkaddeyda, oo aanan la ii arkin (gebi ahaanba) sidii ** god sidii aan horeyba u ahaan jiray. Waxaan ku kalsoonahay dadka inay gaaraan go'aanada aniga agtayda ah, xitaa marka aanan oggolayn. Weligay khatar gelin maayo meheradda ama macmiilka, laakiin sidoo kale waxaan rabaa in dadwaynuhu aysan u baahnayn inay garabkooda fiiriyaan ama ay ka walwalaan waxa ay fikradaydu noqon karto.
Aniga oo dareen ahaan ka go'anaya go'aanada aan kayga ahayn, waxay ii sii kordhineysaa fursado badan oo aan ku hagaajinayo aagagga mas'uuliyadda aniga ah am xakamaynta. Marka waxaan halkaan kugula talinayaa inaad ku guuleysato shaqada berri:
Jooji ka welwelka shaqada uu qof kale mas'uul ka yahay inuu qabto.
Soo bandhig fikraddaada markii lagu weydiiyo, haddii kale naftaada u hayso (haddii aysan qatar gelinayn shirkadda ama macaamiisha mooyee).
Baro sida shucuur ahaan looga fogeeyo go'aamada iyo howlaha aadan lahayn.
Ku mashquul shaqadaada awooddo isbadal la samee.
Waxaad noqon doontaa mid aad u faraxsan, loo-shaqeeyahaagu si dhakhso leh ayuu u horumari doonaa, dadkuna kuugu yeedhi maayaan ** god.
Ku Dalbo Xeerka No Asshole Rule ee Amazon
Tags: assholebuugaagta suuqgeyntamajirto xukun dameerRobert sutton
StumbleUpon wuxuu sii wadaa Feed My Blog
La wadaag Slides-kaaga Slideshare, Facebook iyo LinkedIn
Nov 20, 2008 saacadu markay tahay 11:40 PM
Ma aanan ogeyn in tani ay noqon doonto boosteejo blog-buuxa ah. Waxaan filayay wax la mid ah codbixinta akhristaha waxaanan hubin lahaa jawaabta degdega ah ee haa ama maya oo horay ayaan u socon lahaa.
Kaliya kaftan mudane. Qoraal wanaagsan. Runtii way igu adag tahay inaan iska daayo waxyaabaha qaarkood, laakiin sidaada oo kale waxaan u maleynayaa inaan barto sida loo sameeyo wax badan iyo in ka badan maalin kasta.
Waxaa laga yaabaa inaan buugga kaa amaahdo, laakiin taasi waxay noqoneysaa buugga lambar 4 oo aan ku dhex jiro aqrinta.
Nov 20, 2008 saacadu markay tahay 11:46 PM
Marka maxey noqon laheyd natiijadaada codbixinta? 😉
Nov 21, 2008 at 7: 38 AM
Qoraal wanaagsan. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay xusuusin wanaagsan marka loo eego mid ka mid ah oo aan si fudud gacanta ugu haynin wax kasta, iyadoon loo eegin inta ay le'eg tahay shirkadda iyo iyadoo aan loo eegin sida weyn ee ego.
Nov 21, 2008 at 8: 03 AM
Waxaan kaliya rajaynayaa inaadan u maleynaynin inaan ahay ** dalool cunista keegga ugu dambeeya ee Koobka Bean! Qafaalasho, aniga iyo adiga waxaan labadeenaba ognahay inay jireen daraasiin wali la heli karo ka dib markii aan ka tagay 🙂
Nov 21, 2008 at 9: 40 AM
Ma dooneyn inaan wax uun kaa nidhaahno, laakiin. . . 🙂
Miyaan ku dari karaa qoraalkaan soo socda Buugga Dib-u-eegista Buugga Carnival?
Nov 21, 2008 saacadu markay tahay 1:43 PM
Hi Clark, gabi ahaanba waad ku dari kartaa. Waad ku mahadsantahay weydiinta.
Nov 21, 2008 saacadu markay tahay 12:49 PM
Tan ayaan xoogaa ku arkay dhawaanahan shaqada. Shaqo wadaagayaasha si qiiro leh ugu duuban waxa ay u arkaan inay yihiin go'aano qaldan oo aakhirka aysan xakamayn karin. Waxay u tarjumeysaa dabeecad xumo, luuqad jir xumo, gubasho, waana inay saameyn ku yeelataa tayadooda shaqo. Kaba sii darane, waxaan hubaa in maamulku fiiro gaar ah u leeyahay.